Tinye akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm site na nkwado iwu? Anyị nọ ebe a iji nyere gị aka
Iwu ịgba alụkwaghịm » Itinye akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm
You chọrọ itinye akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm? Mgbe ahụ ịchọrọ onye ọka iwu maka idozi iwu ịgba alụkwaghịm gị. Law & More dị njikere inyere gị aka. Ozugbo gị na onye òtù ọlụlụ gbasịrị, ajụjụ dị mkpa bilitere.
Itinye akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm
You chọrọ itinye akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm? Mgbe ahụ ịchọrọ onye ọka iwu maka idozi iwu ịgba alụkwaghịm gị. Law & More dị njikere inyere gị aka.
> Alụkwaghịm na mkparịta ụka
> Divorcegba alụkwaghịm na-enweghị atụ
> Nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm
> Atụmatụ nne na nna
> Orgba alụkwaghịm na ụmụaka
Ozugbo gị na onye òtù ọlụlụ gbasịrị, ajụjụ dị mkpa bilitere.
• Olee ihe ndị gbara alụkwaghịm?
• willnye ga-ebi n ’ụlọ, onye ga-ahapụ ụlọ ka ọ ga-ere ụlọ ahụ?
• Kedụ ka edoziri elekọta ụmụaka (ụmụ) gị?
• Gịnị ka e kwekọrịtara banyere ịkwụ ụgwọ nwata na onye inyeaka ego?
• Oleekwa nkwekọrịta ị na-eme gbasara nkesa nke ihe gị?
Chọrọ enyemaka gbasara iwu gbasara mmezi ịgba alụkwaghịm gị, na-edezigharị nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm na atụmatụ nne na nna? Law & More ga-enyere gị aka ịmechaa ịgba alụkwaghịm gị. Ndị ọka iwu anyị nwere ihe ọmụma ọkachamara na ngalaba nke iwu ezinụlọ. Anyị ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm ma ọ bụ ọ bụrụ na gị na onye gị na ya chọrọ ịhazi alụkwaghịm ahụ site na nkwekọrịta.
Alụkwaghịm na mkparịta ụka
Ọ bụrụ na gị na onye gị na ya na-akparịta ụka ga-agarịrị izu ma rute nkwekọrịta, anyị ga-enyere gị na onye gị na ya ga-eme nkwekọrịta doro anya aka n'oge nzukọ n'ọfịs anyị. Mgbe emechara nkwekọrịta gbasara ịgba alụkwaghịm ahụ, anyị na-ahụ na edekọtara edezi n'ụzọ ziri ezi na nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm na atụmatụ nke ịzụ ụmụ. Ozugbo emerela gị na onye gị na ya ga-agbaso nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm ma bịanye aka na ya, ịgba alụkwaghịm ga-emecha zụchaa ngwa ngwa.
Divorcegba alụkwaghịm na-enweghị atụ
Ọ bụ ihe nwute, esemokwu dị n'etiti ndị na - esobu ndị ọlụ na - adị elu mgbe ụfọdụ, nke mere na ọdịghịzi adị mkpa ijigide mkparịta ụka ma mezuo nkwekọrịta. Mgbe ahụ ị nwere ike ịbịakwute anyị maka enyemaka ọkachamara na onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm bụ onye ga-ekwurita akụkụ niile gbasara iwu gị. Anyị na-achọ imezu nsonaazụ kacha mma maka gị. N'ime ime nke a, anyị na-elezi anya na-atụle akụkụ iwu ọ bụla. Ọgbụgba ndụ nke ịgba alụkwaghịm na atụmatụ nne na nna bụ ntọala maka ọdịnihu gị na ọdịnihu ụmụ gị. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa iche maka ọdịnaya nke akwụkwọ a yana Law & More onye ọka iwu. N'ụzọ a, ị ga - ejide n'aka na a ga-edetu nkwekọrịta ọ bụla na akwụkwọ n'ụzọ ziri ezi.
Nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm
Nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm, gịnị ka nke ahụ pụtara? Nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm bụ nkwekọrịta edere edere n'etiti gị na onye gị na ya bi. Ọgbụgba ndụ a nwere nkwekọrịta niile gbasara, tinyere ihe ndị ọzọ, inye ego maka mmekọ, ekesa nsonaazụ ezinụlọ, alụm di na nwunye, ezumike nka na nkesa nke ichekwa ego. .
Atụmatụ nne na nna
You nwere obere ụmụaka? Ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụ ihe dị mkpa ịhazi atụmatụ nne na nna. Ọgbụgba ndụ ịgba alụkwaghịm na atụmatụ nne na nna bụ akụkụ nke arịrịọ iji tinye maka ịgba alụkwaghịm. N'ime atụmatụ nne na nna, a na-eme nkwekọrịta gbasara ọnọdụ obibi ụmụaka, nkesa ezumike, nkwekọrịta gbasara ọzụzụ na ileta ndị ọbịa. Anyị ga-enyere gị aka ịme ma dekọ aha nkwekọrịta ndị a. Anyị na-emekwa mkpanaka alimoni nwa.
Ihe ndia bu mmanu:
• nkewa nke nlekọta na ọrụ na-azụlite;
• nkwekọrịta gbasara ụzọ i si agwa ibe gị okwu banyere ụmụaka;
• ego na oge ego nke gị ma ọ bụ onye gị na ya ga-akwụ maka ịzụlite ụmụaka;
• nkwekọrịta banyere onye na-akwụ ụgwọ pụrụ iche, dịka ụlọ ọrụ ngwụsị izu na klọb egwuregwu.
Na mgbakwunye na ngwa mmanye, ọ bụ ihe amamihe dị na gị ịme nkwekọrịta gbasara isiokwu gị na onye gị na ya na-akpakọrịta. Can nwere ike iche maka nkwekọrịta ndị a:
• nkwekọrịta gbasara nhọrọ ụlọ akwụkwọ, ọgwụ na akaụntụ ichekwa ego;
• iwu, dịka ọmụmaatụ banyere oge ụra na ntaramahụhụ;
• ịkpọtụrụ ezinụlọ, dịka nne nne, nne nne, nna na nna.
Orgba alụkwaghịm na ụmụaka
Apptinye akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm abụghị naanị na-enwe mmetụta dị ukwuu na ndụ gị na onye gị na ya na-ebi, kamakwa na nke ụmụ gị (ụmụ). Agba alụkwaghịm ga-eme ka onye gị na ya bi bụrụ onye ọlụburu. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na onye gị na ya biburu ga-abụkwa nne ma ọ bụ nna. Gị na onye gị na ya na-arụkọ ọrụ n’oge ịgba alụkwaghịm na mgbe ọ gbasịrị alụ chọrọ mgbalị dị ukwuu. Ka o sina dị, ndị nne na nna na-arụkọ ọrụ dị ezigbo mkpa maka ọdịmma ụmụaka. Enweghị kọntaktị ma ọ bụ mmekọrịta na-adịghị mma nke nwere ike inwe nsonaazụ ọjọọ maka nwatakịrị. Ma ị nwere ụmụaka ma ọ bụ okenye, ọ dị mkpa na a ga-elebara ihe ha chọrọ anya n'oge ịgba alụkwaghịm..
Iji hụ na ụmụ gị na-ata ahụhụ ihe na-agaghị ekwe omume na ịgba alụkwaghịm ahụ, ọ dị mkpa ịme nkwekọrịta doro anya. Anyị na-enye gị ndụmọdụ gbasara iwu na mkparịta ụka na nnọchite gị.